Xubintii Ciyaaraha iyo cRx Yameni: Manchester U fkf Southampton? (dhegayso) – Radio Daljir
Xubintii Ciyaaraha iyo cRx Yameni: Manchester U fkf Southampton? (dhegayso)
Siteenbar 22, 2017 11:46 g 0
Waxaa la ciyaari doona kulamo ka tirsan horyaalka Ingiriiska, waxaana isbuucii lixaad kulamo xiiso badan laga sugayaa labada kooxdood ee reer Manchester, waxaana la is waydiinaya yaa sii hayn doona hoggaanka horyaalka oo aan laga badinin tan iyo biloowgii.
Dhanka horyaalka spain waxaa la ciyaari doona kulamo xiiso badan. Koxda difaacaysa horyaalka ee Real Madrid ayaa kulan aan sidaas u sii adkayn ciyaari doonta kaddib guuldaradii ka soo gaadhay kooxda Real Betis ee uu hogaamiye tababare Zinedine Zidane.
Wajigii 2aad ee Layrarka Cadceedda oo Laga Hirgaliyey Caabudwaaq (dhegayso)